Ungasifaka njani isandiso seGoogle Chrome kwi-Android | Izikhokelo ze-Android
UCristian Garcia | 08/05/2021 08:51 | Izifundo ze-Android
Ukuba ufike apha kungenxa yokuba uyayithanda iGoogle Chrome kodwa ngaphezulu kwako konke ngenxa yokuba uyazibuza ufaka njani ulwandiso lwe chrome kwi Android. Ewe, kwinqaku elilandelayo siza kufunda ngendlela ifowuni yethu ephathekayo ye-Android enokuthi ifakwe ngayo izandiso ezenza ukuba ukuhamba kwethu kube lula.
Olunye lweempawu zekhompyuter okanye izikhangeli ze-pc ezinje ngeGoogle Chrome lolwandiso lwazo oludumileyo, oluthi kule meko luphume lube ngcono. Ngolwandiso, wena njengomsebenzisi ungongeza imisebenzi eyongezelelweyo njengomphathi wegama eligqithisiweyo okanye inkqubo yokulawula iiwindows okanye iithebhu. IFirefox, iEdge kunye neChannel (kunye nezikhangeli ezisekwe kwiChromium) zinezandiso zazo kunye neevenkile zazo, kodwa nangona zilungile, zihlala zingafumaneki kwiinguqulelo ze-Android.
Iiflegi zeChannel: yintoni kunye nendlela yokufikelela kweyona ilungileyo
Nangona kunjalo, nangona sithe ulwandiso lwe-Chrome lwe-Android alunakongezwa, banokufakwa kwisikhangeli somntu wesithathu esithandwayo kwaye sinokuvakala ngathi siyinto kuwe. Ibizwa ngokuba yi-Kiwi kwaye iphuhliswa ngu-arnaud42 (umsebenzisi we-XDA). Isikhangeli seKiwi sikuvumela Ukufaka ulwandiso ngokukhawuleza kwaye ngokulula sisisombululo sethu kwiingxaki zokongezwa. Makhe sibone ukuba singayifaka njani yonke le nto.
1 Faka ulwandiso ngeKiwi
2 Khuphela i-Kiwi
Faka ulwandiso ngeKiwi
Okokuqala kufuneka sikuxelele okanye sicacise into ibenye, kukho icala eliphantsi, ngelishwa ayizizo zonke izandiso ezihambelana nesikhangeli seKiwi. Ukuxhaswa kweKiwi kunqunyelwe kwizandiso ezingasebenzisi ikhowudi ye-x86 yokubiniKe ngoko, siyazisola ukukuxelela ukuba ezona zandiso zinzima kwinkqubo zisenokungakwazi ukufakwa kwisikhangeli. Oko kwathethileyo, uninzi lwezona zaziwa kakhulu kwaye zikhutshiwe ezinje nge UBlock Origin okanye iTamperMonkey basebenza ngaphandle kweengxaki esizaziyo.
Nje ukuba siyenze le ngcaciso, ukuze ungafumani nto, sinokuqala ukucacisa inyathelo ngenyathelo indlela yokufaka izandiso zeChannel kwi-Android.
Njengoko kucacile kwaye ubusele uzibuza, into yokuqala yile Faka isiKhangeli seKiwi kwivenkile yeGoogle Play. Nje ukuba uyifakile, unokuvula nayiphi na iwindow onayo kwaye kuya kufuneka ulandele la manyathelo:
Cinezela amanqaku amathathu oza kuwafumana kwindawo ephezulu ekunene ukuvula useto lwebrawuza ye-Kiwi
Nje ukuba uvule, khetha "Izandiso".
Ngoku cofa kwisicatshulwa esithi "Google" okanye ucofe kwimigca emithathu ebekwe kwindawo ephezulu yasekhohlo nasemva koko, khetha "Vula iVenkile yeWebhu ye-Kiwi". Olu fikelelo lubini lukhokelela kwindawo enye: Ivenkile yolwandiso lukaGoogle.
Khetha enye kwezo zivelayo okanye ukhangele leyo ufuna ukuyisebenzisa.
Cofa kuyo uze ukhethe ukhetho oluthi "Yongeza kwi-Chrome." Ukukhuphela kuya kuqala kwaye kwenzeke ngokuzenzekelayo njengayo nayiphi na enye.
Xa ikhutshiwe ngokupheleleyo, iKiwi iya kukubonisa ulwazi ekufuneka ulwandiso lufikelele kulo.
Okokugqibela, kuya kufuneka ukhethe "Kulungile" kwaye ulinde imizuzwana embalwa ukuze ufakelo lugqitywe.
Nje ukuba uqiniseke ukuba ukufakela kugqityiwe, kuyakufuneka ucinezele kwakhona kumanqaku amathathu abekwe kwindawo ephezulu ngasekunene nasemva kokurola yonke indlela ukuya ezantsi ukujonga ukuba, ewe, ulwandiso lufakwe ngempumelelo kwifowuni yakho ephathekayo. Ukuba emva kwayo yonke le nto, ucofa kuyo, ungayenza isebenze, uyilawule okanye uyiqwalasele ngendlela ofuna ngayo.
Ufikile apha unokuzibuza ukukhipha njani ulwandiso. Ewe, kwenziwa ngendlela elula kakhulu. Kuya kufuneka uchwetheze kuphela ibha yokukhangela "chrome: // extensions" kodwa ngaphandle kwezicatshulwa, kwaye ke uya kuba nakho ukufikelela kuluhlu lwazo zonke izandiso ozifakileyo kwiKiwi nakwi-smartphone yakho. Emva koku, uya kubona ukuba phantsi nganye nganye kuvela iqhosha "ukucima" Cofa kwela qhosha, yamkele into abayibuzayo kunye ne-voila, uya kuthi ulwandiso lukhutshwe
Ukukunika incam engakumbi kwaye wenze kube lula kakhulu kuwe ukufumana yonke into, kuya kufuneka uyazi ukuba Ivenkile esemthethweni yeChannel yolwandiso, inewebhu, eyi chrome.google.com/webstore. Ukusuka apho unokucofa nganye nganye kwaye ukhuphele ezona uzithandayo.
Uyenza njani imowudi emnyama kwiGoogle Chrome
Xa ungena kwivenkile yeChannel, i Isitolo sewebhu se-ChromeIsikhangeli se Kiwi siza kukubonisa iphepha, phantse lonke, kwinguqulelo yedesktop yalo ngokuzenzekelayo. Apha, konke okufuneka ukwenze kukufumana kwaye ufake iprofayili yolwandiso ongathanda ukuyifaka kwisikhangeli sakho ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kwi-Android.
Okokugqibela ndiyakukhumbuza kwakhona ukuba Uninzi lwezandiso azilungelelaniswanga kwiselfowuni, uninzi lwazo lusenokungasebenzi, kwaye isikhangeli se-Kiwi sixhasa kuphela ukungenisa izandiso ze-Chrome ezingaxhomekeki ngqo kwi-x86 ikhowudi yeprogram yekhowudi.
IsiKhangeli seKiwi-Ukukhawuleza kunye nokuThula
Umthuthukisi: Ijometri OU
IsiKhangeli seKiwi sisikhangeli esenziwe yiGeometry OU, umphuhlisi olilungu le-XDA owayephakathi kuka-2007 no-2008 wayesebenzela uGoogle kuphuhliso lweChromium, isiseko apho uphuhliso lweGoogle Chrome lusekwe khona. Lo mvelisi usebenze kule ndlela iinyanga ezimbalwa kwaye sele ifumaneka kuGoogle Play ukuze ikhutshelwe luluntu ngokubanzi, ngenxa yoko, singonwabela esi sikhangeli.
Isikhangeli, ngokucacileyo, sifana kakhulu neGoogle Chrome, kuba isekwe kwiChromium 69 kwaye kunokuthiwa ngabazala bokuqala, babelana nomphuhlisi njengoko siphawulile. IsiKhangeli seKiwi sisebenza kakuhle kwaye asinazongezo zonakalisa amava omsebenzisi. Kananjalo kwaye njengoko kulindelwe, ukuba usungula esinye isikhangeli kwiGoogle Chrome, uyisungula ngophuculo, ke siyakuqinisekisa ukuba iKiwi iza nayo ukuphunyezwa okuninzi okuphucula ukusebenza kunye ne-ad blocker yongezwe ngokwendalo, ngaphandle kokuyongeza ngokudibanisa, ke okokuqala ukukhuphela esikwenzayo sonke sele kuza kumgangatho.
Phakathi kwako konke ukuphucuka okukhoyo sinokufumana ithuba lokutshintsha indawo ebar yokukhangela kwaye uyibeke emazantsi, ifikeleleka ngakumbi kwiifowuni ezinkulu eziphathwayo kunye notshintsho olungenaso esinye isikhangeli esiphathwayo, ubuncinci kwezi sivavanyileyo.
Ngokubhekisele kwiinjini zokukhangela, kufuneka sitsho ukuba ukhetho olusisiseko ibikukugcina iGoogle kuphela, nangona kungekho nto yenzekayo ukuba sifuna ukongeza enye, kuya kufuneka ukhangele kuyo kwaye iya kudityaniswa kwisikhangeli.
Uyibeka njani kwaye uyenze ngokwezifiso ibha kaGoogle kwiselfowuni yakho ye-Android
Eminye imisebenzi yesikhangeli seKiwi Browser inokuba yindawo yokudlala iividiyo zikaYouTube ngasemva ngaphandle kokongeza nantoni na evela kubantu besithathu, ibhloko ye-cryptocurrency kwaye ikunika ithuba lokuba ukwazi ukufaka incoko yenethiwekhi yoluntu i-Facebook, ngaphandle kwesidingo sokufaka i-Facebook Messenger, ke ngoko, uyonga kwindawo. Ukuba siza kuphawula ngendlela ezisebenza ngayo izinto ezikhutshelweyo, sinokukhetha ukuba zeziphi iifolda esifuna ukugcinwa kuzo, into esingayibonanga kwezinye iibrawuza.
Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, olunye lolongezo olukhulu lwe-Kiwi Browser yi Imo emnyama ukuba ibandakanya uthotho, olusandula ukufakwa. Kulunge kakhulu, ngakumbi ukuba ifowuni yethu ephathekayo inesikrini se-AMOLED, kuba kuzo, abantu abamnyama bajonge ngakumbi. Ukongeza koku, imowudi inokwenziwa ngokwezifiso, ukwazi ukukhetha ukuba umnyama unamahluko we-100% ukuze ipikseli icekeceke okanye ukuba ukhetha, ngokuchaseneyo, unokuba nesikali esingwevu.
I-Android nayo inendlela emnyama kodwa inyani kukuba ngumsebenzi ebesingathanda ukuwufumana kuseto ngaphakathi kuGoogle Chrome. Kuni nonke enithi, njengathi, niyiphose le, kwi IsiKhangeli seKiwi unayo ngokululaNgapha koko, ilula kangangokuba kubonakala ngathi akukho ngqiqweni ukuba ayifumaneki ngale ndlela kwezinye izikhangeli ekhuphisana nayo.
Okwangoku sinethemba lokusombulula umbuzo malunga nokuba ungazifaka njani izandiso ze-Chrome kwi-Android kwaye ukusukela ngoku, uyazi ukuba kukho isikhangeli esingcono kakhulu, esenziwe ngomnye wabazali bakaGoogle Chrome. Sishiye kwibhokisi yezimvo ukuba ubuyazi okanye njani amava wokukhuphela izandiso ze-Android kunye ne-Kiwi Browser.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Izifundo ze-Android » Ungasifaka njani isandiso seGoogle Chrome kwi-Android
Olunye ukhetho olungcono kwi-AirPlay ye-Android